HS:- Xakuu ku danbeeyey mashruucii dhismaha garoonka diyaaradaha
Posted by admin on December 03 2012 03:57:37
HS:- Xakuu ku danbeeyey mashruucii dhismaha garoonka diyaaradaha Ugaas Khalif ee magaalada B/weyne ee ay balan qaaday Hayadda USIAD.War bixin
HS:- Waxaa macquul ah marka ay dad badan arkaan ciwaanka qoraalkaan iney iska qaataan go,aano shaqsi ah iyagoo isla markiiba isweydiinayo waxa uu garoonka dhismahiisa u xayiran yahay iney tahay nabadgalyo xumo ka jirto Hiiraan.
Sidoo kale waxaa macquul ah in qaar kale is leeyahiin Hayadda USAID waxey sugeysaa isbedelada dhawaan ka dhici doono Hiiraan ee lagu soo dooran doono maamul cusub oo ku yimid doorasho amaba rabitaanka shacabka Hiiraan.
Hadaba isku day iyo xog aanu soo wadnay mudo walina qabyo ah ayaa waxey muujineysaa in mashruuca uu u xayiran yahay intaan oo qodob.
1- Hay'addii mashruucaan balan qaaday waxaa arintaan wakiil uga ah shaqsiyaad Soomaali ah kuwaasi oo iskugu jira kuwo Hayadda si toos ah uga socda iyo shaqsiyaad sheeganaya jagooyin ay u magacaawday dowladii waqtigeeda dhamaaday kuwaasi oo dowlada Mareykanka ka dhaadhiciyey in ay mashruuca wakiil uga yahiin dowlada federalka shaqsiyaadkaasi waxey ka soo jeedaan beelaha ay dhibeyso horumarka Hiiraan qaarkoodna siiba kuwa sheegta iney dowlada dhexe wakiil uga yahiin mashaariicda laga hirgalinayo gobolada oo mir mirsiyo arintaan uga dhigay intaan oo qodob.
1- Waxey sheegaan in mashruucaas uusan hirgali karin maadaama ay maamulka gobolka Hiiraan aysan hal dhinac wax iskula wadin oo qaar gudoomiye kuxigeenada gobolka Hiiraan ka mid ah u arkaan garoonkaas oo la dhiso inuu dan u yahay beelo gaar ah oo uusan reer Hiiraan oo dhan dan ugu jirin
Qodobada ugu muhiimsan iyo shaqsiyaadka arintaan ku lugta leh waxaan ku soo qaadan doonaa magacyadooda qoraalkeena danbe marka ay warbixinta inoo soo dhamaato.
Waxaase in leys weydiiyo u baahan waqti intee la eg ayaa Hiiraan horumarka lagala dagaali karaa? Garoonka diyaaradaha Ugaas Khalif maanta waxaa gacanta ku haya Amisom oo waa nabad maxaa ka hortaagan hayaddii USIAD?.
Marka laga soo tago in mashruucii USIAD uusan wali gaarin Hiiraan amaba aan laga fulin hadane waxaan shaki ku jirin inuu jiro dhaliilo rasmi ah oo uu leeyahay maamulka kumeel gaarka ah ee Hiiraan ka jira kuwaasi oo aan iyagu caqabad ku aheyn horumarka Hiiraan laakinse aqoontooda iyo waxa ay qaban karaan ayba intaas dhaafsiisneyn.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ay dad badan u arkaan marka ay muuqaalkiisa arkaan inuu yahay nin dhalinyaro ah oo siyaasada deg deg ku soo galay waxaa mashruuca arintiisa inbadan kaka xog ogaalsan mid ka mid ah xaasaskiisa oo sida la sheego turjubaan u ah, ma ahan in aanu ninkaas dhalinyarada ah wax uusan aheyn ka sheegeeyno xaqiiqda Hiiraan ka jirto iyo qaabka uu u shaqeeyo gudoomiyaha ayaa ah sidan.
Inta aan soo bandhigin magacyada shaqsiyaadka Soomaalida ah ee aan reer Hiiraanka aheyn ee arintaan hor taagan waxaa muhiim ah in la fahmo qaabka uu maamulka Hiiraan ka jiro u shaqeeyo markaas kadib waxaad gar waaqsaneysaa in reer Hiiraan u baahan yahiin maamul cusub oo la jaan qaada xukumadan cusub si meesha looga saaro maamulada la soo shaqeeyey dowladahii kumeel gaarka ahaa ee wadanka soo maray kuwaasi oo shaqsiyaadkii hogaamiyey intooda badan ku xirnaayeen kooxahii islaamiyiinta ahaa iyo burcad badeeda.
Qurba joogta reer Hiiraan oo siyaasada iyo arimaha Hiiraan siweyn ula socda sanadahii danbe, ayaa dhawaan si cilmiyeysan iyagoo iska warqaba ula xariiray gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyagoo bal gudoomiyaha oo ay horey ugu maqleen inuu yahay nin inta badan hadba siduu jecel yahay u hadla. waxeyna waceen waqtiyo aan sidaas u kala fogeyn mudo 24 saac gudahood ah waxaana dadka qaarkii ka yaabisay sida uu koox kasta waxaan jirin ugu sheegay (Misinformation) xili ay intooda badan ka dhegersan yahiin xaalada guud ee Hiiraan taala.
Sikasta oo ay ahaataba Hiiraan dhawaan iyo wax u dhaw ma noqon doonto Hiiraantii la yaqiinay markaad aragto loolan asyan dad badan ogeyn oo ka dhaxeeya gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo kuxigeenadiisa, canshuurta laga qaado koontaroolka Kala Beyr oo 90% loo gacan galiyo mid ka mid ah wadamada ay Soomaaliya ka joogaan ciidamada dhaqaalahaas oo ku baxa dhawr sarkaal oo degaankaas ku sugan lama yaqaano waxa loo laaluushaa saraakiisha oo ay bulshada ku soo kordhinayaan.
Inkasta oo aysan wax badan ku habooneyn mediyaha in lagu soo qoro Hiiraan waxey ka mid noqotay bilahii ugu danbeeyey degaanada siweyn looga isticmaalo qamrada nooca loo yaqaano Calaqa hadii aad reer Hiiraan tahay ka nax ama ku farax hadii sidey wax u jiraan Hiiraan looga qoro hal maalin maamulka hada jira Hiiraan ma sii joogeen hadii ay jiraan cid u damqaneysa bulshada Hiiraan oo u baahan in loo qabto adeegyo badan oo ay ugu horeeyaan caafimaadka, waxbarashada, dhismaha wadooyinka maamulka hada ka arimiya Hiiraan ma ahan midkii arintaas fududeyn lahaa waqtigaad doono gali warbixintaan hadii aad tahay muwaadin reer Hiiraan ah amaba doonayo inuu mar uun arko Soomaaliya oo nabad ah Hiiraana kaalinta 1aad ka kasho horumarka dalka.
Hadii qormadaan shaki badan kaa galo masuuliyiinta aanu qaarkood magacooda xusnay ee maamulka Hiiraan ku magacaaban siyaabo kala duwan u weydii siiba gudoomiyaha iyo kuxigeenadiisa halka uu mashruucaas ku danbeyn doono amaba ku danbeeyey,kadibna kaalinta horumarka Hiiraan kaaka aadan isweydii hadii aad degaankaas ka soo jeedo.
La soco wararkeena danbe iyo xog rasmi ah oo ku saabsan dib u dhaca dhismaha garoonka diyaaradaha Ugaas Khalif ee magaalada B/weyne.